XOG: Guddoomiye Tuulax oo ka badbaaday shirqool la doonayay iney in lagu qaarijiyo & 2-ruux oo loo xiray | Baahin Media
XOG: Guddoomiye Tuulax oo ka badbaaday shirqool la doonayay iney in lagu qaarijiyo & 2-ruux oo loo xiray
Ciidanka Sirdoonka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay labo dhalinyaro oo hubeysan kuwaasi oo damacsanaa iney qaarijitaan Guddoomiye ku-xigeenka amniga Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax.
Labadan ruux oo ku hubeysnaa Bastoolado ayaa lagu qabtay dhabarka dambe ee guriga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay Guddoomiye Tuulax,kuwaasi oo markii la joojiyay isku dayay iney baxsadaan balse ugu dambeyntii la qabtay.
Xogta labadani ruux oo maalmo ka hor gaartay Sirdoonka Soomaaliya ayaa lagu daba jiray,waxaan gelinkii dambe ee shalay oo taariikhda ku beegneyd 10-6-2019 lagu qabtay degmada WartaNabada Ex-Wardhiigley xilli ay ku jireen sahminta qaabka ay u fulin lahaayeen shirqoolka dilka ah ee Guddoomiye ku-xigeenka aniga Gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax.
Mid ka mid ah Ciidanka Sirdoonka oo ka fuliyay howlgalka raggan lagu soo qabtay oo magaciisa diiday inaan adeegsano ayaa sheegay in hadda labada ruux oo da’dooda u dhaxeyso 19-20 ay ku xiran yihiin saldhiga degmada Hodan ee Gobolka Banaadir halkaas oo lagu baarayo.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa wuxuu degan yahay degmada Warta Nabada gaar ahaan dhabarka dambe ee Madaxtooyada Soomaaliya halka loo yaqaano Shimbiraale oo ay degan yihiin mas’uuliyiin xilal ka haya Dowladda iyo kuwo horay u soo qabtay,waana goob ammaankeeda aad loo ilaaliyo.